musha nyika dzakabatana NFL Vatambi Matthew Stafford Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yakazara yemutambo wenhabvu anozivikanwa kwazvo nezita rekuti ""Phatt Mat".
Yedu Matthew Stafford Yemwana Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Kuongororwa kweAmerican nhabvu quarterback kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yehupenyu pamberi pemukurumbira, nhoroondo yemhuri uye hupenyu hwega. Kunyanya zvakadaro, zvimwe OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Hongu, munhu wose anoziva ndiye mumwe wevatambi vanobhadharwa zvakanyanya muNFL.
Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Matthew Stafford's Biography, iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
Matthew Stafford Yemwana Nhau - Hupenyu hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri:
Johane Mateo Stafford akaberekwa pazuva rechinomwe raFebruary 7 kuTampa muFlorida USA. Aive dangwe pavanun'una vashanu, akaberekwa naamai vake, Margaret Stafford, uye kuna baba vake, John Stafford.
Young Stafford akakurira kuDallas, Texas pamwe chete nehanzvadzi yake duku, Page Stafford nevamwe vanun'una vatatu vasingazivikanwi nezvazvo.
Iyo nyika yeAmerica yemidzi isina kuzivikanwa uye dzinza raizivikanwa kuti ichinyatsoziva uye inopedza njere sechecheche, ichibatanidza maitiro ataurwa pamusoro apa nemafungiro akanaka emitambo uye kutora kushingaira kunobatanidzwa mumitambo yehuduku inosanganisira baseball, basketball nebhola.
Nekudaro, yaive nhabvu yakaita kuti hunhu hwaStafford hwakaoma kuregeredza. Unyanzvi hwake mumutambo uyu hwakanga husiri hwevatorwa chete kuvana vezera rake asi akakwezva kutarisa kwemurairidzi wake wenhabvu murairidzi Randy Allen.
“Ndakatanga kufarira kumutarisa, uye aigona kukanda bhora mugiredhi rechisere anenge mayadhi makumi masere. Hazvisi - hauoni vakomana vazhinji vegiredhi sere vachikanda kure kudaro. ”
Allen anga asiri wekurega nhabvu prodigy ichipedza simba mune mimwe mitambo. pane rimwe zuva rakanaka, akakumbira mudzidzi wechisere kubva mukirasi kuti ave nehurukuro yaizove iyo dombo repakona rebasa raStafford.
"Ndakanga ndiri mwana muduku uye ndaive nemafungiro makuru uye zvose zvezvinhu zvakadaro, asi iye (Allen) akauya uye akandibvisa kunze kwekirasi yakanga yakanaka uye yakanga isingatarisirwi zvachose."
Anocherekedza Stafford wekutenda kwaAllen maari.
Matthew Stafford Dzidzo:
Stafford's academic background inosanganisira dzidzo yake kuHighland Park muDallas, Texas. Paaive pakakwirira, Stafford aive nyeredzi nhabvu mutambi akaitwa kota yekutanga yekambani yechikoro mukati megore rake rekupedzisira.
Kubudirira kwake kukuru pamwe nechikwata kunovatungamira kune akakwana 15-0 rekodhi uye kuhwina mukwikwidzi wenyika.
Izvi, pakati peimwe mitambo yakatanhamara, zvakaita kuti Stafford akunde mibairo yakawanda, kusanganisira MVP neBest Arm mibairo pa2005 EA Sports Elite 11 Quarterback Camp pamwe nekupihwa 2005 EA Sports National Player yeGore.
Matthew Stafford Biography - Kumuka Kuti Ubudirire Mukurumbira:
2007 ndiyo gore iro Stafford akazvipira kuGeorge Bulldogs football yeYunivhesiti yeGeorgia, achitanga basa rekoroji rakange rakasimbiswa nezvakafanotaurwa kubva pundits rakamusunga kuti ave wokutanga kutora mu 2009 NFL Draft.
Stafford nhamba zvaishamisa. Akanga asiri mumwe wokupotsa chiratidzo. Chimiro chake chepamusoro cheGeorgia Bulldogs chakamuona achive Detroit Lions nhamba yekutanga pakauya NFL dhizaini muna Kubvumbi 2009.
Akasaina rekodhi $ 41.7 dhiri naDetroit Shumba kuti ave iye akabhadharwa mari kwazvo mutambi wenhabvu panguva iyoyo. Nekukurumidza kumberi kusvika parizvino Stafford achiri pakati pevatambi vanobhadharwa zvakanyanya muNFL.
Ndiani Kelly Hall - Mukadzi waMateu Stafford:
Stafford murume akaroorwa. Tinokuendesa mberi zvakanyanya zvehupenyu hwake hwemhuri kusanganisira kuti akasangana sei ndokuroora mudzimai wake Kelly Hall.
Antonio Brown Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Vakaroorana vakaungana panguva yekoroji yavo paYunivhesiti yeGeorgia. Stafford akanga ari mutungamiri wekamberi panguva iyoyo apo Kelly aiva cheerleader achitarisira murume wake kubva kune imwe nzvimbo.
Vakatora makore akawanda vasati varoorwa paC4th yaApril 2015.
Mhuri yavo inokomborerwa nevanasikana vaviri vaSawyer naChandler (akaberekerwa 31st March 2007) pamwe chete nemumwe musikana Hunter Hope (akaberekwa 16th August 2018).
Matthew Stafford Hupenyu Hwemhuri:
Stafford akaberekerwa mumhuri ye7. Tinokuunzira mashoko echokwadi nezvemitezo yemhuri yake.
Nezve baba vaMateo Stafford:
John Stafford ndiye murume ari kumashure kwezviitiko zvebasa rinoshamisa remwanakomana wake. Iye akambopedza kudzidza mudzidzi weYunivhesiti yeGeorgia chinyararire anotamba chinotsigira muhupenyu hwemwanakomana wake wedangwe.
Nezve amai vaMateu Stafford:
Margaret Stafford anga ari kunze uye nemukati achibatanidzwa mubasa remwanakomana wake.
Yaiva Margaret uyo akabatsira wechidiki Stafford kuvaka chivimbo chake mubhola kubva kuchikoro chesekondari kusvika kukoreji. Anowanzo famba kubva kuDallas kunoona mitambo yemwanakomana wake muDetroit.
Nezve hama dzaMateu Stafford:
Michael ndiye wedangwe pavakoma vashanu, avo vatatu vasingazivikanwe. Iye chete munin'ina anozivikanwa ndiye munin'ina wake anonzi Peji. Iye mutambi uyo akatamba volleyball panguva yake yekusekondari mazuva.
Peji (inoratidzwa kuruboshwe) naamai vaStafford Margaret.
Matthew Stafford Biography Chokwadi - Untold Basa Rechokwadi:
Stafford ine mari inofungidzirwa inosvika zviuru zana nemakumi mana nematatu emadhora.
Chikamu chakakura cheNet Worth chinobva mukusaina kwake mabhonasi madhiri, mihoro kubva kuDetroit Lions, mari yakazvimirira (yaive yakavanzika) uye Endorsement zvibvumirano.
Kubvumirana kunosanganisira avo vakasaina naPanini, Ford, Nike, Fanatics, St. Joe's Hospital, Van Heusen, Blue Cross / Blue Shield uye Pepsi.
Matthew Stafford Hupenyu hweMunhu:
Stafford akachengetedza zvakawanda zvehutano hwake hwehuduku kusanganisira unhu hwake hwekuziva sezvaanogara achiedza kuziva zvishoma nezvezvinhu zvose kuburikidza nekuverenga mabhuku uye kuva nekutaurirana nevadzidzisi pamatunhu akasiyana.
Kunyangwe zvakadaro, Stafford munhu akazvimiririra asina nhaka yeakaundi account. Kunyanya zvakadaro, akadzima yake Twitter account uye akadzika Facebook sezvo mbiri yake ichiwedzera.
Matthew Stafford Mararamiro:
Stafford ane mufananidzo wamambo muDetroit uye anofamba nenzira yake achipoterera guta nemota dzemhando yepamusoro dzinosanganisira Rolls Royce, Ferrari, Bentley, Audi uye Range Rover.
Muchiedza chimwe chete, "Mambo wepanzvimbo" vanogara pamwe chete nemukadzi wake nevanasikana pane imwe imba yaakatenga ye $ 2.8 mamirioni (ikozvino anokosha mamirioni 3.8) kuDetroit.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Matthew Stafford Childhood Story pamwe chete biography nhoroondo. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!